Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.3.3 Cost
Kuongorora havasi vakasununguka, uye ichi ndicho nekurovererwa chaiyo.
Kusvika ikozvino, ndakapfupisa zvishoma nezveongororo yakawanda yekuongororwa, iyo iyo ndiyo nyaya yezvokurapa kwenguva refu (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Kunyange zvazvo urongwa uhwu hwakazara, inowanzoita kuti vatsvakurudzi vanyatsocherechedza chinhu chinokosha: mari. Kunyange mari-iyo inogona kuyerwa nenguva kana mari-inowanzotaurwa zvakanzwisiswa nevatsvakurudzi vezvidzidzo, icho chikonzero chaicho chisingafaniri kuchengetwa. Ikozvino, mari inokosha kune iyo yose yekuongorora tsvakurudzo (Groves 2004) : ndicho chikonzero vatsvakurudzi vanobvunza bhidhiyo yevanhu panzvimbo yevanhu vose. Kuzvipira kumunhu mumwe chete mukuderedza kukanganisa apo kunyatsorega kubhadhara mari hakusi nguva dzose zvatinogona.
Kukanganisa kwekutsvaga nekugadzirisa kukanganisa kunoratidzirwa nebasa rinokosha reScott Keeter nevamwe vashandi (2000) pamusoro pemigumisiro yemabasa ekudhura kwemunda ekuderedza kusarura mumapurisa ekuongorora. Keeter uye vaishanda navo vakamhanyira zvidzidzo zviviri panguva imwechete, imwe inoshandisa "mitemo" yekutsvaga nzira uye imwe inoshandisa "zvakasimba" nzira dzekutsvaga. Kusiyana pakati pezvidzidzo zviviri kwaive chiyero chekuedza kwakaenda kunosangana nevakabvunzwa nekuvakurudzira kuti vatore chikamu. Somuenzaniso, mukudzidza ne "kushingaira" kubasa, vatsvakurudzi vakadana mhuri dzakadhaniwa kakawanda uye kwenguva yakareba uye vakadanidzira zvakanyanya kudai vatori vechikamu pakutanga vakaramba kutora chikamu. Izvozvi kuwedzera kwekuita kwakatoita chaizvoizvo kubereka chidimbu chepasi chekusaremekedza, asi vakawedzera kune mari yakawanda. Chidzidzo ichi chinoshandisa "kukanganisa" nzira dzakapetwa kaviri zvakadhura uye kasere katatu. Uye, pakuguma, zvose zvidzidzo zvakabudisa zviyero zvakaenzana zvakafanana. Iri purogiramu, pamwe nekudzokorora kunotevera kune zvakafanana zvakawanikwa (Keeter et al. 2006) , zvinofanira kukutungamirira iwe kuti unetseke: tiri nani here nekuongorora kwakajeka kana kuongorora kumwe chete? Zvakadini ne10 kuongorora kunonzwisisika kana kumwe kuongorora kwakajeka? Ko zvakadini zana zvinongororwa zvinotsvakurudza kana imwe tsvakurudzo yakajeka? Pane imwe nguva, mari inobatsira inofanira kunge yakanyanyisa, isina hanya nehuwandu hwehutano.
Sezvandichazviratidza mune izvi zvese zvechitsauko, mikana yakawanda yakasikwa nezera rejitori haisi pamusoro pekugadzirisa zvikwanganiso izvo zviri pachena kuti zvine mhosho yakadzika. Pane kudaro, mikana iyi iri pamusoro pekuenzanisa zviyero zvakasiyana uye nezvekugadzirisa kuenzanisa nokukurumidza uye zvisingabhadhari, kunyange pamwe nemapapiro makuru. Vatsvakurudzi vanomanikidza kushaya pfungwa imwechete nekudzikisa kukanganisa pazvinodhura zvimwe zviyero zvehutano zvichabviswa pamatambudziko anofadza. Tichipa mamiriro aya ehutano pamusoro pehuwandu hwekuongororwa kwekangororo, isu zvino tichazoenda kune zvikamu zvitatu zvakakosha munguva yechitatu yekutsvakurudza tsvakurudzo: nzira itsva dzekumiririra (chikamu 3.4), nzira itsva dzekuenzanisa (chikamu 3.5), uye matsva matsva ekubatanidza tsvakurudzo nehurukuro huru yezvinyorwa (chikamu 3.6).